မိမိ ရဲ့ ဖိုင်တွေ Folder တွေကို Lock ချမယ် | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
မိမိ ရဲ့ ဖိုင်တွေ Folder တွေကို Lock ချမယ်
Posted on September 2, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
ဒါလေး ကတော့ မိမိအသုံးမပြု့စေချင်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဖိုလ်ဒါတွေကို
မိမိ ခွင့်ပြု့ချက်မရပဲ မိမိ သိမ်းထားတဲ့ Password မသိပဲ နဲ့ ဖွင့်မရအောင်
Lock ချပေးပါတယ် တခါတရ့မှာ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကို မိမိ မသိအောင် လာပြီးမွှေနှောက်
ပြီး ဖွင့်ကြည့်တာကို ကာကွယ်ဖို့ပါ Private only ပေါ့
နောက်တခု့ မိမိရဲ့ ဖိုင်တွေကို လော့ ချ လို့ရတဲ့ အပြင် သူများမမြင်အောင်သိမ်းထားလို့လည်းရပါတယ်
အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ
ဆော့ဝဲလေး ကိုတော့ Serial key နဲ့ Fullversion လုပ်ရမှာပါ
အထဲမှာလည်း တခါတည်း Key ဖိုင်ပါပါတယ် Key ဖြည်တဲ့ အချိန်မှာ
မိမိ ရဲ့ Email ကိုလည်း ဖြည့်ပေးရပါမယ် မိမိကြိုက်တဲ့ မေးလ် ထည့်လို့ရပါတယ်
ဆော့ ဝဲလေး ကိုတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ်
ZIPPYSHARE | BOX | SHAREBEAST
• Password Protected :
This entry was posted in Folder Lock. Bookmark the permalink.
← ကွန်ပြူတာမှာ Screenshotဖမ်းရန် Screenshot Studio 1.9.98.43 with Keygen
ISO ဖိုင်ကနေ Boot တက်နည်း။ →